Shayton Equilibrium Hypercar - Famolavolana
Hypercar Shayton Equilibrium dia maneho ny hedonismana madio, fanodikodinana amin'ny kodiarana efatra, hevitra tsy mahomby amin'ny ankamaroan'ny olona ary ny fahatanterahan'ny nofy ho an'ny olom-bitsy vitsivitsy. Izy io dia maneho ny fahafinaretana farany, fomba fijery vaovao amin'ny fahatongavana avy amin'ny teboka iray, izay tsy maha-lehibe tahaka ny traikefa ny tanjona. Shayton dia natao hamantatra ny fetran'ny fahaizana ara-materialy, mba hizaha toetra vaovao maintso maoderina izay afaka manatsara ny fampisehoana mandritra ny fitehirizana ny tsindry amin'ny hipoka. Ny dingana manaraka dia ny fitadiavana ny mpampiasa vola sy ny fanaovana Shayton Equilibrium ho zavamisy.
Anaran'ny tetikasa : Shayton Equilibrium, Anaran'ny mpamorona : Andrej Stanta, Anaran'ny mpanjifa : Shayton Automotive.
Fiara fiara, fanetsiketsehana ary famolavolana fitaterana